Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Afduubka Kevin Scott Sutay
Afduubka Kevin Scott Sutay
El Retorno, Kolombiya | 20 Juun, 2013
20 Juun, 2013, waa muwaadin Maraykan ah Kevin Scott Sutay waxaa afduubtay Ciidanka Xoogga Kacaanka ee Kolombiya (Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)) ee degmada El Retorno ee Kolombiya. Sutay, wuxuu horey uga tirsanaa oo uu xubin ka ahaa adeegga ciidanka Mareykanka, wuxuu safar dalxiis oo socod dheer ah ku jiray wadamo badan oo Koonfurta iyo Bartaha Ameerika ah.
19 Luulyo, 2013, FARC waxay soo saareen ogeysiis iyagoo sheeganaya mas’uuliyadda in iyagu ay yihiin kuwa ka dambeeyay afduubkii iyagoo sheegay waxa ay damacsan yihiin si ay xuryaddiisa dib ay Sutay ugu soo celin la’haayeen iyagoo ay ka tahay fal niyad wanaag. Hase-yeeshee, Sutay lama soo dayn ilaa laga gaaro 27 October, 2013, goorta lagu soo celiyay Waaxda Guaviare iyadoo ay weheliyeen dowladdaha Kolombiya, Kuuba, iyo Noorway, iyo xubno ka mid ah Guddiga Caalmadiga ee Laanqeerta Cas. Markaas ka dib, Sutay waxaa gacanta loo soo geliyay Dowladda Mareykanka saaraakiisheeda joogay Bogota, Kolombiya, oo Mareykanka ayaa dib loogu soo celiyay.
Barnaamijka Abaal-marinta Caddaalada waxay bixinaysaa abaal-marin gaaraysa ilaa $3 milyan oo doolar qofkii keena macluumaad u horseeda in kuwa mas’uulka ka ah weerarkan caddaaladda la horkeenno.